Koofiyadaha loo yaqaan 'Kid Winter Knit Warm Skull Ski Beanie Cap Koofiyadaha Haweenka
Waxyaabaha: The tolnimo qalfoof diiran koofiyad waxaa laga sameeyaa 100% polyester , wHich waa qaro weyn oo raaxo leh. Waxay kaa dhigi kartaa inaad dareento diirimaad iyo moodel.
HAL SIZE AYAA KU BADAN: daboolka dhalada haweenka leh laastik ah, hal cabir oo leh fiditaan wanaagsan, wareegga madaxa: Qiyaas ahaan (56-58cm) kaas oo ku habboon dadka cabirkiisa inta badan.
Naqshad Faahfaahin:Kuweena beanie Koofiyadaha qaro weyn loogu tolay naqshad weyn oo "Slouch" ah, qafiif ah laakiin dhab ahaantii diiran. Waa safarka ugufiican waa inuu lahaadaa waxaana loo isticmaali karaa waxqabadyada banaanka sida socodka ama barafka si maalinba maalinta ka dambeysa shaqooyinka caadiga ah sida dukaamaysiga ama orodka.
SAHAL FUDUD: ilmaha yar jiilaalka tol koofiyad diiran noqon kartaa gacanta lagu dhaqi karo iyo mashiinka lagu dhaqi karo.
Koofiyadaha jilicsan ee jilicsan ee Jiilaalka ee Gabdhaha Gabdhaha
Is rogrogmi kara: dabool diiran oo tolmo leh waa kuwo jilicsan oo fidsan, jilicsan oo raaxo leh, kuma sababi doonaan culeys madaxa ilmahaaga inta ay diirimaadka hayaan, oo ku habboon yihiin dhallaanka, socod baradka, carruurta iyo carruurta, si fudud loola jaanqaadi karo dharka maalinlaha ah waxayna ku dari kartaa dareen aad u qurux badan oo xiiso leh dharka maalinlaha ah
Guriga Ka Doorbid Koofiyadda Jiilaalka oo leh dhag Nabar leh oo loogu talagalay Ragga
JAWAABTII & HAL-ABUURKA - Tan guriga doorbido koofiyad jiilaal wuxuu soo bandhigayaa naqshad dhogor cusub oo hoos u dhig ah oo loogu talagalay ilaalinta dhagaha iyo qoorta dhaxanta iyo dabaysha. Markuu jirkaagu diirimaadda, si fudud u rog burka dhegaha si uu kaaga caawiyo hagaajinta heerkulka jirkaaga.
RAAXADA SUPERIOR - polyester-ka / suufka dhejiska ah ee daboolka ragga ee ragga ayaa si aan caadi aheyn u raaxeysanaya waxayna soo bandhigeysaa taam sugan. Mashiinka ku dhaq dhaqitaanka meertada jilicsan; hawada qalalan.
Dhimista Glaashada - Koofiyaddan Jiilaalka oo leh dhagta Brimiga leh ee Ragga ayaa leh mugdi hoosta biilka kaas oo kaa caawinaya inaad indhahaaga ka ilaaliso qorraxda inta lagu jiro cayaaraha xilliga qaboobaha. Sida aan u ordi doono, socodka, iyo barafka barafka ah waxaa loo isticmaalaa ciyaaraha dayrta iyo golfka jiilaalka.
Koofiyadaha Isboortiga ee Qorraxda Booqashada loogu talagalay ragga iyo dumarka
Xiritaanka Hook iyo Loop
Nalka ka bixi Indhahaaga: Miyaad xanuunsan tahay oo aad ka daashay qorraxda indhahaaga soo galaysa, dhammaantood laakiin si ku meel gaar ah ayaa kuu indho tiraya. Taasi waa waxa aan halkan u joogno. Koofiyadaha visor-ka ee la hagaajin karo waxay ka ilaalin doonaan dhalaalka indhahaaga, waxayna u muuqdaan kuwo aad u fiican inta ay sidaas sameynayaan, sidoo kale.
Ku Wanaagsan Ciyaaraha iyo Hawlaha Bannaanka: Tan outdoor sdekedaha sun visor hats waxaa loogu talagalay inay noqdaan miisaan fudud, neefsasho iyo raaxo leh. Weligood jidkaaga ku soo dhici maayaan, sidaa darteed iyagu waa qalabka ku habboon ee wadista, orodka, cayaaraha, iyo waxqabadyada kale ee bannaanka.
Waxyaabaha Tayada Sare: Marka ay timaaddo annaga outdoor sdekedaha sun visor hats, waxaan ka dhignaa hal dhibic oo aan isticmaalno wax aan ahayn tayada suufka dabiiciga ah ee ugu tayada fiican, iyo sidoo kale hababka wax soo saarka casriga ah iyo xakamaynta tayada adag.
Qalab Casri ah oo Casri ah: outdoor sdekedaha sun visor hats s ayaa aad uga badan sidii aad uga badbaadin lahayd qorraxda, ama qalab isboorti. Xaqiiqdii waa qalab casri ah oo casri ah, iyo hab fiican oo looga sarreeyo isboortiga magaalooyinka ama qaabka caadiga ah.
Ragga Koofiyad lagu hagaajin karo Snapback Koofiyad
Koofiyadda loo yaqaan 'Camouflage Snapback Hat' ee safarka, socodka, beerta, kalluumeysiga iyo howlaha kale ee bannaanka.
Xilliyadaha: guga, xagaaga, deyrta.
La hagaajin karo, hal cabir ayaa ku habboon dadka waaweyn ee unisex.
Ku habboon da'da badankood.
Miisaanka fudud oo raaxo leh, oo ku habboon gudaha iyo dibadda.
Qaab-dhismeedka Ciidanka Xoogga Sare
Daboolka milatari ee qaabka ugu sarreeya ee dabaqyada loogu talagalay raggaas oo leh cabirro madax weyn
Taajka sare ee fidsan, biil adag oo horay u qalooca, midab u dhigma biilka
Koofiyad fidsan oo tayo sare leh oo waara
Dhameystiray jillaab la hagaajin karo iyo xiritaanka loop
Naqshadaynta STYLISH: Kuwani waa wax lagu farxo kids boy girl bkubbadda cagta cap hat waa Koofiyad Jiifka ah ee ilmahaagu ku faani doono inuu xidho oo muujiyo meel kasta oo ay tagto.
SHAQADA PREMIUM: 5-ta guddi ee waara oo raaxo leh kids boy girl bkubbadda cagta cap hat Waxay kuxirantahay geeska qalooca, midabada Panda sawirada astaamaha ah ee gudaha Sweatband iyo Velcro xiritaanka si loogu habeeyo fudud si caruurtaadu aysan uga saarin.
Koofiyadaha Isboorti ee Neefsashada Neefta lagu hagaajin karo ee loogu talagalay Golf Tennis
Muuqaal: Koofiyadaha muraayadaha ballaadhan ee cirifka laga celin karo, waxay leeyihiin difaac qorraxda UV ah.
Cabir: tan Koofiyadaha Isboorti ee Neefsashada Neefta lagu hagaajin karo ee loogu talagalay Golf Tennis , Hal Cabir Ayaa Ku Habboona Inta Badan. Iyada oo xirida dhabarka ee Velcro.
UPF 50 + Koofiyadaha Dib-u-laabista Dibadda ee Koofiyadaha Sport ee aan habaysnayn ee Ragga iyo Haweenka
Shaashadda Qorraxda: Waxay leedahay 50 + UPF si loo joojiyo fallaaraha UV ee waxyeellada leh isla markaana looga caawiyo ilaalinta maqaarkaaga, Maaddooyin gaar ah oo leh ka hortagga UV-ka oo soo maray baaritaanka UPF 50 +. taas oo ah ilaalinta UV ee dhabta ah. Ku darista Naqshadeynta Ballaaran iyo Dheer, Madaxaaga, Wejigaaga, Sankaaga iyo Qoorta Hore ayaa si fiican loo dabooli karaa. Waxay kaa ilaalinaysaa qorraxda inay gubato si ka wanaagsan. Qalalan Neefsasho Degdeg ah: Adoo adeegsanaya dhar nabar aad u sarreeya iyo qoyaan qoyan iyo naqshad mesh ballaaran, waxay kuu keenaysaa wax badan oo qabow iyo raaxo leh. Koofiyadu si dhakhso leh ayey u qalali kartaa dhaqitaanka ka dib
Bannaanka Dabaysha Banaanka ee Dabaqyada leh Daboolida Mesh Face Neck Flap Cover